March 7, 2021 Xuseen 13
Puntlandtimes (Beled-xaawo)-Wararka aan ka heleyno degmada Ceel-waaq ee Gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegayaan in Garoonka diyaaradaha ee ku yaalla degmadaas ay xireen Ciidanka dowladda Kenya ee AMISOM ee jooga halkaas.
Ciidanka Kenya ayaa dhagxaan farabadan ku xiray dhabbaha Garoonka Ceel-waaq ee cagga dhigtaan diyaaradaha halkaas ku dega, waxaana istaagay shaqooyinka Garoonka, sida ay sheegayaan dadka deegaanka.
Dadka deegaanka Ceel-waaq ayaa Ciidanka Kenya ka dalbaday inay dib u furaan Garoonka ay dhagxaanta ku xireen, si dadka Gobolka Gedo ee abaarta heyso loo soo gaarsiiyo Gargaar deg deg ah.
Qaar kamid ah dadka ayaa dowladda Federaalka ugu baaqay inay Gargaar lasoo gaaran, isla markaana la furo garoonka diyaaradaha degmada ay xireen Ciidanka dowladda Kenya ee qeyta ka ah howlgalka AMISOM, lamana oga sababta ay u xireen.
Maamulka Gobolka iyo kan degmada Ceel-waaq ayaa weli ka hadlin sababta ay Ciidanka Kenya ku xireen Garoonka, xili dadka kunool Gobolkaas ay saameysay abaar xoogan, isla markaana halkaas ka jirto biyo la’aan.
Gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa xiligaan ka jira abaaro darran oo sameeyay dadka iyo xoolaha, isla markaana waxaa go’ay ceelashii biyaha laga cabi jiray, iyadoona dadka ay heysato xaalad adeg oo u baahan in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo.
Meeyey Madaxyare Ismaqiiqe farmaajo? hadda oo kale waa markii uu dhuuman jirey. Faankii iyo fudeydkii halkee mareen?
BWB. Adiga waxaa ku ahay cudur iyo cuqdad Farmaajo. Meeyey Axmed dhuxul iyo Deni sinsibaar. Waa ku Wii muddad lugoynayey gedo been been Ah. Waa taas Kenya arinteedi cadaaday EE Airport ka garkaarku ka soo deglahaa xidhay iyadoo ka baqaysa ciidamadda Gorgor.
mohamed Rashaad says:
Warkii kenya iyo Ahmed madoobe ma wuxuu noqday meel carruurtii oon ugu le’atay inay siixidhaan Allow sahal arinta.
Madaxweynaha qaranka mudane Mohamed Allah Mohammed waa inaad talaabo deg-deg qaadaa to carrurta somaliyed ee oonku laynayo looga dulqaado cadowga isu bahaystay gurmadmana loo gaarsiiyo.
War somaalaay waa kaa debinkay maleegayeen duf iyo duruf laal ninkii moodayooy inay khayr iyo wanaag kuu galayeen
Oday Wax Badan Og says:
BWB , ma waxaad ammaanaysaa oo la dhacsan tahay UHURU iyo Ceelwaaq waxa uu ka wado oo aad ku dhaleecaynaysaa Farmaajo…Ma ahi taageeraysha Farmaajo, balse waxaan ahay Soomaali diidan in Kenya dhib u gaysato dadkiisa ku tabaalaysan deegaannada xuduud beenaadka Kenya ku teedsan, oo cid walba ka dharagsan tahay in UHURU iyo Kooxo Soomaali ah oo la shaqaynayaa rabaan inay Badda ICJ 15ka March ku carqaladeeyaan ….BWB waxa laga yaabaa in siyaasisi beeshiinna ah oo siyaasad ay ku kala duwan yihiin Farmaajo aad u qortay hadalkaas balse aad iska illoowday in waxa meesha yaal intaas ka weyn yihiin …
Laba DAFLE gooma ayaad dad noqoneysaan. Sidaan waa ceeb JAAJUUSNIMO IYO RUFYAANIMO inaad hungri ku raadisaan. Dhulmahane maxaa DADLE idin ka wad dhigey? Ismaqiiqe farmaajo hadeer ayuu tagin, Maxaa idiin qorsheysan? Mise waligeen waa MUKU-LAALEYNASAAN. Oo ninkii yimaada waad u buraan burassan?
Kuwa la baxay Darwiish iyo Oday wax badan og, waxaad tihiin furuukhdii lafoole idinka iyo Farmaajo doqon.
Ceelwaaq ma hooyadiin baa leh anakaa joogno mana dooneyno Farmaajo doqon iyo Alshabaabkiisa fuck you both of you/
Kenya makabaxeyso Soomaalia waligeedana ciidamodeeda ha keento hana joogaan Dal Soomaali.
Bashiir. Caydu waamaxay. Jaasjuusinta Kamya miyaad miyaad tahay. Ok waa ku fahamay.iska oy.
Ma jaajuus, ruufyaan, Dhulmahante aan aheyn miyaa Somalia ka jira?
Ma 3 Afle aan Dhulmahante aheyn ayaa jira?
Ma reer aan Dhulmahante oo aan DEFLE miiran aheyn ayaan jira?
Ma reer aan Dhulmahante oo Puntland, Somaliland iyo Xamar ka kala qaraabta ayaa jirta?
Ma reer sagxadda yaal oo qaawan meel cidla yaala oo Dhulmahante ayaa jira?
DARWIISH udaa dad waxuuda. Ogaadeen ayaa leh Darwiish.
Meedey Laascaanood, Yahoori iyo Sool oo dhan? Ship dheh hadal kuuma bamaana ILAAYDA waad ka hooseysaan?
Armaad adigu tahay doqon isla gar leh. kenyana wa rabna farmaajana ma rabno warkaasi sax ma ahn e wala arki doona hadey socon.
kkk Cayaalka Majeerten maskaxiyan waa waasheen waxbaa la mucaaradaa un bay maqleen.Bal ii sheega Farmaajo ciidan kama joogo.Dagaal ooge Axmed madoobe iyo biiraqaatayaal Marexan ah ayaa jooga.Su’aashu waxaa weeye maxay galabsaden shacabkaa aan siyaasadaba shaqo ku lahayn?
ANIGAA IDIIN SHEEGAYA MAJEERTEEN ISIR NACAYB UN BAA U GAYSAY WAX KALE MA AHAN ANKEE HADDUU FARMAAJO JOOGI LAHAYN SIDAN UN BAY U FAKARI LAHAAYEEN.
Waxaan is iraah Majeerteen waa dadka ugu gaaagaaban ugu fool xun Somalida marka laga reebo nimankaan reer Mudugga(Cumar Maxamuud)Marka intan sida xun u fakaraysa iyo xool xumadooda ayaa is leh waqti haku luminana.
KK WAR FARMAAJO HADDUU CAAWA TAGO MAXAAD QAADI KARTAA?CAJIIB ADIGOO MAJEERTEEN AH AYAAD U HANJABAYSAA DHULBAHANTE KKKK KALA QAYBSANAANTA MIYAAD KU ARAGTAY WALIGIINBA MEEL DAGAN BAAD FIIRSATAAN WAKAASE ISAAQ LA HADLA AMA SACAD.
Nin dhulkiisii la haysto oo wiilal Isaaq ahi hooyadiis iyo walaashiis habeen iyo maalin faraxumayn ku hayaan oo homless ah inangumeed inangumeed dhalay gun ah waxa uu uu Ceelwaaq uga hadlayo anigu garanmaayo runtii. Dhulbahante waa sharaf iyo karaamo beelay ini Farmaajana waxba uma tari karaan habeena meel ma seexin karaan saa iiyagaaba homless ahe, ini Farmaajana iyaga wax uma tari karo waxaa la yiri laako sagaaro raqbay istaraan. Yar yar ka Daarood ee Farmaajaha firxad ka ah wada caashaqsan maxay u tari karaan dadka wax u tari kara inay ku diraan ma ogiye.
@Faysal in aad waalan tahay Dhulbahante ayaad yaryar ku sheegaysaa dadka maba kala taqaanid cayaalkii 1991 dheh.
Majeerteen oo dhan walaahi Marexan Gedo ayaa ka badan cadaynteedana waa lagusiin karaa beentii iyo huuhaadii Somali waa baratay.